Kolombia - Ny antony rehetra hitsidihana ity firenena ity | Fitsangatsanganana tanteraka
Colombia dia firenena iray izay any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Amerika atsimo. Ny renivohiny dia Bogotá ary matetika no teboka voalohany hitsidika azy. Afaka mitsidika ny foibe manan-tantara isika amin'izany, mianika ny Cerro de Montserrate, manitsaka ny Plaza de Bolívar na mankafy ireo tranombakoka ao aminy.
Raha iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra izay ho hitantsika any Kolombia dia mitondra ny anaran'ny Barichara, miaraka amin'ny tontolo voajanahary tanteraka sy eo anelanelan'ny tendrombohitra, misy arabe tery. Mazava ho azy, tsy afaka manadino ny tanàna misy màndan'i Cartagena de Indias izahay, miaraka amin'ireo trano fanjanahan-tany ary koa arabe vita amin'ny vatokely.
Iray amin'ireo fijanonana hafa koa i Medellín, izay hamangiantsika ny ivon-toerany sy ny Plaza Botero. Ho hitanao eo ny lapan'ny kolontsaina sy ny tranombakoka ao. Tsy manadino ny Basilica an'ny vadin'ny Candelaria. Mba hampisy loko iray dia manana tanàna hafa antsoina hoe Guatapé, izay eo akaikin'ny fitahirizana artifisialy isika.
Ny faritra fantatra amin'ny anarana hoe Eje Cafetero dia tsy tokony hajanona koa. Tendrombohitra marobe mitambatra amin'ny tanàna izay manana zavatra betsaka hatolotra toa an'i Salento na Filandia ary Manizales. Amin'ity farany ity dia afaka mankafy ny Tilikambo any Sipra ianao ary mananika ny Katedraly, izay ahitanao ny fahitana tsara indrindra.
Novena bonus Krismasy, firaisana amin'ny fianakaviana
ny Daniel hace 7 volana .
Ny Novena de Aguinaldos dia iray amin'ireo lovantsofina Krismasy lehibe sy miorim-paka ao Kolombia. Tena…
Tsy isalasalana fa ny gadona mozika mifandray indrindra amin'i Kolombia, ny kolontsainy ary ny olony, dia ilay cumbia. Tsy misy…
Ireo ornithologists sy tia natiora avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nitety an'i Amerika atsimo nandritra ny am-polony taona maro ...
Fomban-drazana kolontsaina sy maritrano Popayán
ny maruuzen hace 7 volana .
Amerika Latinina dia manana toeran-kaleha mahafinaritra ary i Kolombia dia mifantoka amin'ny sasany amin'ireo tsara indrindra. Ohatra, Popayán, iray amin'ireo ...
Asan'ny tompo Alejandro Obregón
ny Daniel hace 10 volana .
Alejandro Obregón dia raisina ho iray amin'ireo mpanao hosodoko amerikana espaniola lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Deraina hatrizay ny zavatra noforoniny ...
Angano mahagaga any amin'ny Riandranon'i Churumbelo
Mandehandeha any atsimon'i Colombia izahay, indrindra amin'ny Departemantan'i Putumayo, hihaona amin'ny iray amin'ireo toerana majika indrindra ...
Ny toetrandro any Kolombia
ny Isabel hace 11 volana .
Ny iray amin'ireo lafin-javatra tsy nampoizina ny mpandeha mitsidika an'i Colombia voalohany dia ny fitovian'ny ...
Ny zava-pisotro Kolombiana, ny marika
ny Kolombia Absolut hace 11 volana .
Ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny zava-pisotro misy alikaola na zava-pisotro misy azy avy. Ilay avy any Kolombia dia ny lamaody, tsy isalasalana fa ny zava-pisotro misy alikaola ...
Faritra arkeolojika an'ny Tierradentro, any Cauca
ny Daniel hace 11 volana .
Ny iray amin'ireo harena sarobidin'ny sivilizasiôna alohan'ny Columbian ao Kolombia dia hita ao amin'ny Tierradentro National Archaeological Park….
Ny tetezana mahafinaritra an'ny mpitia eo anelanelan'ny Providencia sy Santa Catalina
ny Daniel hace 12 volana .
Betsaka ny antony hitsidihana ny nosin'i San Andrés, Providencia ary Santa Catalina, toerana any an-danitra any amin'ny ranon'ny ...
Ny condor an'ny Andes, vorona nasionaly
Ny Condor of the Andes dia iray amin'ireo biby marika marika any Amerika atsimo. Ity vorona be voninahitra ity dia ...
Kolombia, firenena misy kolontsaina marobe
Ny cumbia, gadona solontenan'i Kolombia
Toy izao no nanamboarana ny Fahaleovantenan'i Kolombia
Faritra jeografika ao Kôlômbia
Ny mampiavaka ny fanampiana Colombiana
Lovia mahazatra an'ny faritra Amazon
Akanjo kolombiana mahazatra
Sakafo mahazatra any amin'ny faritra Karaiba
Lovia mahazatra an'ny faritra Andes
Ny Cordilleras any Kolombia
Bandeja paisa, ity no lovia mahazatra indrindra any Kolombia
Faritra any Kolombia
Fomba amam-panao Kolombia
Fomba amam-panao sy kolontsaina any amin'ny faritra Amazon
Ny tanàna lehibe any Kolombia